युरोकपः फ्रान्स र हंगेरी भिड्दै – yuwa Awaj
युरोकपः फ्रान्स र हंगेरी भिड्दै
असार ५, २०७८ शनिबार 74
युरोकपमा फ्रान्सले शनिबार नेपाली समयअनुसार ६ः४५ मा हुने खेलमा हंगेरीको सामना गर्दैछ । यसअघि जर्मनीलाई उसैको मैदानमा १–० ले हराउँदै फ्रान्सले प्रतियोगितामा विजयी सुरुवात गरेको थियो । यता, घरेलु मैदानमै पोर्चुगलसँग हंगेरी ३–० ले
पराजित भएको थियो । तर, हंगेरीले तीनवटै गोल अन्त्यमा गएर खाएको थियो । खेलको ८४ मिनेटसम्म उसले डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोर्चुगललाई गोल गर्न दिएको थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा कुनै खेल सहज हुन्न भन्ने दृष्टान्त यो खेल थियो ।
हंगेरीले पहिलो हाफमा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई दोस्रो हाफमा पनि निरन्तरता नै दिएको थियो । खेलपछि उसका प्रशिक्षक मार्को रोस्सीले ८४ मिनेट नभएर ९० मिनेटसम्म लागु हुने गेम प्लान तयार गर्ने बताएका छन् । यता, फ्रान्स भने जितका
लागि विश्वस्त नै भएको हुनुपर्छ । उसँग राफाल भराने, पाउल पोग्बा, एनगोलो कान्टे, एन्टोनियो ग्रिजम्यान, कालियन एमबाप्पे, करिम बेन्जामाजस्ता विश्वकै उत्कृष्ट खेलाडी छन् ।
पछिल्लो ५ खेलमा फ्रान्सले कुनै गोल नखाई जित हासिल
गरेको छ । आफ्नो क्लिन सिटलाई छैटौं खेलसम्म लम्ब्याउने पक्षमा फ्रान्स हुनेछ । घरेलु समर्थकको सद्भावले पक्कै पनि बुडापेस्टमा फ्रान्सविरुद्ध भिड्नका लागि हंगेरीलाई हौसला भने दिनेछ । के भन्छन् प्रशिक्षक ?
मार्को रोस्सी, हंगेरी : हाम्रा लागि यो ठूलो प्रेरणा हो । हामी विश्व च्याम्पियनको कुरा गरिरहेका छौं । जो स्पष्ट दाबेदार हो र जोसँग यो दुनियाँबाहिरका एमबाप्पे छन् । हामी झन्डै असंभव कार्य पछाडि उभिएका छांै, तर पनि हामी आफ्नो तर्फबाट सबै दिन गइरहेका छौं ।
डिडियर डेसच्याम्पस, फ्रान्स : उनीहरु लडाकु र कडा मेहिनती टोली हुन् र निकै संयोजित छन् । इटलियन प्रशिक्षक हुनुले पनि उनीहरुबारे धेरै वर्णन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
उनीहरु घरमा छन् र पोर्चुगलविरुद्ध उनीहरुले देखाएजस्तै प्रतिबद्धता आजको खेलमा देखाउनेछन् भन्ने मेरो अपेक्षा छ । यदी हामीले जित्यौं भने हामी दोस्रो खेलबाटै दोस्रो चरणमा छनोट हुनेछौं । हाम्रो पहिलो लक्ष्य त्यही हो ।
Prevलुम्बिनी विकास कोषलाई स्वास्थ्य समाग्री सहयोग
Nextसेती नदीले खतराको सतह पार गर्‍यो
बिहान खाली पेटमा दुई पोटी लसुन र एक गिलास पानी खानुहोस्, हुने छ यतिधेरै फाइदा…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।
दैनिक रूपमा ओखर खानुको यति धेरै फाइदा…हेर्नुहोस । सेयर गरौ !
रुपा सुनारलाई कोठा भाडामा नदिएको आरोपमा प’क्राउ परेकी सरस्वती छुटिन्